Volcanoes na Iceland: àgwà na eruptions | Meteorology netwọkụ
Volcanoes na Iceland
Portillo nke German | 07/01/2022 11:28 | Geology
Iceland, ala ice na ọkụ, bụ paradaịs okike. Ike oyi nke glaciers na ihu igwe arctic na-emegide okpomọkụ na-agbawa agbawa nke ụwa. Ihe si na ya pụta bụ ụwa nke ọdịiche dị egwu na ịma mma na-enweghị atụ nke ọdịdị ala dị egwu. Enweghị ugwu mgbawa Iceland, ihe a niile agaghị ekwe omume. Ike nke ugwu mgbawa na iceland Ọ nwere ike ịkọwa ọdịdị ala a nke ọma karịa ugwu mgbawa ọ bụla ọzọ, na-ekepụta ubi lava na-adịghị agwụ agwụ, nnukwu ọzara nke ájá ojii, na ugwu ndị siri ike na nnukwu olulu mmiri.
Ya mere, anyị ga-enyefe akụkọ a iji gwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara ugwu mgbawa na Iceland na njirimara na mkpa ha.
1 Volcanoes na Iceland
2 Mmadụ ole dị?
3 Ugboro nke eruptions
4 Ihe egwu nke ugwu mgbawa na Iceland
Ndị agha mgbawa ugwu ndị dị n'okpuru ala emepụtakwala ụfọdụ ihe ịtụnanya kacha ewu ewu na mba ahụ, dịka isi iyi ọkụ eke na-agbawa geysers. Na mgbakwunye, a na-ahụ mmetụta nke mgbawa n'oge gara aga n'ọnụ ọnụ ugwu ndị a na-eme n'ọgba lava na ogidi basalt hexagonal.
Ọtụtụ puku mmadụ gbagara Iceland ka ha hụ ugwu mgbawa ya na ọrụ ebube ndị ha kere na-aga n'ihu na-emepụta. N'oge mgbawa ugwu mgbawa, anyị kwesịrị ịdịkwu ọkụ n'obi maka ohere hụ otu n'ime ihe ịtụnanya kacha dị egwu n'ụwa. N'iburu n'uche na ọ dị mkpa maka ọdịdị Iceland na ọdịdị nke ụlọ ọrụ na ọbụna ọdịdị nke mba ahụ, anyị achịkọtala ntuziaka a na-enye ikike na ugwu mgbawa nke Iceland, anyị na-atụkwa anya na ọ nwere ike ịza ajụjụ niile ị nwere ike ịjụ onwe gị. ike nke ugwu mgbawa a.
Mmadụ ole dị?
Na Iceland, e nwere ihe dị ka 130 ugwu mgbawa ọkụ na ugwu mgbawa na-ehi ụra. Enwere ihe dị ka sistemụ mgbawa ọkụ 30 na-arụ ọrụ n'okpuru agwaetiti ahụ, ma e wezụga na West Fjords, na mba ahụ dum.
Ihe kpatara na West Fjords anaghịzi enwe ọrụ mgbawa ugwu bụ na ọ bụ akụkụ kacha ochie na ala Icelandic. E hiwere ya ihe dị ka nde afọ 16 gara aga ma ọ ga-apụ n'anya site na Oke Mid-Atlantic. Ya mere, West Fjords bụ nanị mpaghara nke mba ahụ chọrọ ọkụ eletrik iji kpoo mmiri kama mmiri geothermal.
Ọrụ mgbawa ugwu na Iceland bụ n'ihi ọnọdụ obodo ahụ kpọmkwem na oke ugwu etiti Atlantic nke na-ekewa efere tectonic North America na Eurasia. Iceland bụ otu n'ime ebe ole na ole n'ụwa ebe ugwu a nwere ike ịhụ n'elu ọkwa oke osimiri. Plate tectonic ndị a dị iche, nke pụtara na ha kewapụrụ onwe ha. N'ime nke a, magma dị na uwe mwụda ahụ ga-apụta na-ejupụta oghere a na-emepụta wee pụta n'ụdị mgbawa ugwu. Ihe omume a na-eme n'akụkụ ugwu, a pụkwara ịhụ ya n'àgwàetiti ndị ọzọ na-agbapụta ọkụ, dị ka Azores ma ọ bụ Santa Elena.
Ebe etiti Atlantic na-agafe na Iceland niile, n'ezie ọtụtụ n'ime agwaetiti ahụ dị na kọntinent America. Enwere ọtụtụ ebe n'obodo a ebe enwere ike ịhụ mkpọda akụkụ, gụnyere Reykjanes Peninsula na mpaghara Mývatn, mana nke kachasị mma bụ Thingvellir. N'ebe ahụ, ị ​​nwere ike ịgafe na ndagwurugwu dị n'etiti efere ma hụ nke ọma mgbidi nke kọntinent abụọ n'akụkụ ọ bụla nke ogige ntụrụndụ mba. N'ihi ọdịiche dị n'etiti efere, ndagwurugwu a na-agbasa ihe dịka 2,5 cm kwa afọ.
Ugboro nke eruptions
A naghị atụ anya mgbawa ugwu mgbawa na Iceland, mana ọ na-emekarị mgbe niile. Enwebeghị afọ iri kemgbe mmalite XNUMX na-enweghị mgbawa, ọ bụ ezie na ihe gbasara nke puru omume na ha na-eme ngwa ngwa ma ọ bụ karịa n'ọtụtụ ebe bụ nnọọ enweghị usoro.
Mgbawa ikpeazụ mara na Iceland mere na Holuhraun na Highland na 2014. Grímsfjall dekwara obere mgbawa na 2011, ebe ugwu mgbawa Eyjafjallajökull a ma ama kpatara nsogbu siri ike na 2010. Ihe kpatara eji jiri okwu 'mara' mee ihe Ọ bụ n'ihi na enyo na enwere otutu mgbawa ugwu mgbawa n'akụkụ dị iche iche nke mba ahụ na-emebibeghị mpempe ice, gụnyere Katla na 2017 na Hamelin na 2011.
Ugbu a, ihe iyi egwu ndụ mmadụ n'oge mgbawa ugwu mgbawa na Iceland dị obere. Ụlọ ọrụ seismic ndị gbasasịrị na mba ahụ dị mma nke ukwuu n'ịkọ ha. Ọ bụrụ na nnukwu ugwu mgbawa dị ka Katla ma ọ bụ Askja na-egosi akara ụda, a ga-amachibido ịbanye na mpaghara ahụ, a ga-enyochakwa mpaghara ahụ nke ọma.
N'ihi akọ na uche dị mma nke ndị mbụ biri, ugwu mgbawa kacha arụ ọrụ dị anya site na oghere ndị mmadụ bi. Dị ka ihe atụ, e nwere obodo ole na ole n’ebe ndịda ụsọ oké osimiri Iceland, n’ihi na ugwu mgbawa dị ka Katla na Eyjafjallajökull dị n’ebe ugwu. N'ihi na ọnụ ọgụgụ ndị a dị n'okpuru glacier. mgbawa ya ga-eme ka nnukwu idei mmiri glacial, nke nwere ike ikpochapụ ihe niile na-aga n'oké osimiri.
Nke a bụ ihe na-eme ka ọtụtụ ndịda yie ọzara ojii. N'ezie, ọ bụ larịị mebere nke glacial nkwụnye ego.
Ihe egwu nke ugwu mgbawa na Iceland
N'ihi enweghị amụma ha, idei mmiri ndị a na-egbuke egbuke, nke a maara dị ka jökulhlaups, ma ọ bụ Spanish na Icelandic, ka bụ otu n'ime akụkụ kachasị dị ize ndụ nke ọrụ mgbawa ugwu Iceland. Dị ka e kwuru n'elu, ọ bụghị mgbe niile ka a na-ahụ mgbawa n'okpuru ice, n'ihi ya, idei mmiri ndị a nwere ike ime na-enweghị ịdọ aka ná ntị.
N'ezie, sayensị na-aga n'ihu mgbe niile, ma ugbu a, Ọ bụrụhaala na enwere ntakịrị obi abụọ na akụ mmiri igwe nwere ike ime, ị nwere ike ịpụpụ wee nyochaa mpaghara. Ya mere, maka ihe doro anya, a machibidoro ịnya ụgbọ ala n'okporo ụzọ a machibidoro iwu, ọbụna n'oge okpomọkụ ma ọ bụ mgbe o yiri ka ọ dịghị ihe ize ndụ.
Ọ bụ ezie na ọtụtụ ugwu mgbawa dị anya site na ebe ndị mmadụ juru, ihe mberede na-eme mgbe niile. N'okwu ndị a, Otú ọ dị, usoro ihe mberede nke Iceland egosiwo na ọ dị irè nke ukwuu, dị ka a hụrụ na mgbawa 1973 na Heimaey na Vestman Islands.
Hemai bụ naanị agwaetiti ndị mmadụ bi na Vestman Islands, agwaetiti na-agbọpụta ugwu. Mgbe ugwu mgbawa ahụ gbawara, mmadụ 5.200 bi n'ebe ahụ. N'isi ụtụtụ nke ọnwa Jenụwarị 22, mgbawa malitere imeghe na mpụga obodo ahụ wee gbuo n'etiti etiti obodo ahụ, na-emebi okporo ụzọ ma na-ekpuchi ọtụtụ narị ụlọ lava.
Ọ bụ ezie na ọ na-eme n'ime abalị na n'oge oyi, a na-ebupụ n'àgwàetiti ahụ ngwa ngwa na nke ọma. Ozugbo ndị bi ebe ahụ rutere n'enweghị nsogbu, ndị ọrụ nnapụta na ndị agha US nọ na mba ahụ rụkọrọ ọrụ iji belata mmebi ahụ.
Site n'ịgbanye mmiri mmiri mgbe niile n'ime mmiri mmiri, ọ bụghị nanị na ha jisiri ike ibugharị ya n'ọtụtụ ụlọ, ma gbochie ya imechi ọdụ ụgbọ mmiri ahụ, na-eme ka akụ na ụba nke agwaetiti ahụ kwụsị ruo mgbe ebighị ebi.
Enwere m olileanya na site na ozi a, ị ga-amụtakwu banyere ugwu mgbawa na Iceland na njirimara ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Volcanoes na Iceland